DEG-DEG: Arsenal Oo La Saxeexatay "New Ibrahimovic", Kooxda Uu Kaga Yimid & Haddii Uu Arteta Toos Ula Shaqayn Doono - Gool24.Net
DEG-DEG: Arsenal Oo La Saxeexatay “New Ibrahimovic”, Kooxda Uu Kaga Yimid & Haddii Uu Arteta Toos Ula Shaqayn Doono
Kooxda Premier League ee Arsenal ayaa ku dhawaaqday saxeexa weeraryahanka da’yarta ah ee Nikolaj Moller oo ay kala soo wareegeen kooxda Malmo isla markaana lagu naanayso Zlatan Ibrahimovic-ka cusub maadaama oo uu Malmo kasoo baxay.
18 sano jirkan ayaa Arsenal kusoo biiray shalay oo Isniin ahayd kahor xidhitaankii suuqa kala iibsiga balse maanta saxeexiisa ay kooxdu shaacisay iyagoo kula soo saxeexday lacag 450,000 oo Pound ah.
Moller ayaa heshiis afar sano ah la gaadhay Arsenal waxaana uu u ciyaari doonaa kooxda uu tababaraha u yahay Steve Bould ee da’deedu 23 sano jirada ka yartahay isagoo aan deg-deg usoo geli doonin kooxda koowaad ee Mikel Arteta.
18 sano jirkan ayaa labadii sano ee ugu dambeeyay kusoo qaatay kooxda Bologna uu ahayd halkii lagu siiyay naanaysta “Ibra”, hubaal Arsenal iyo Ibrahimovic ayaa rajayn doona in naanaystaasi ay dhab ahaato oo uu 39 sano jirka halyeeyga u ah dalkiisa wadadiisii raaci doono.
Moller ayaa 19 kulan oo uu Bologna usoo ciyaaray saddex gool usoo dhaliyay iyagoo qayb kasoo ahaa heerka labaad ee horyaalada Talyaaniga.
Moller ayaa noqonaya ciyaaryahankii ugu dambeeyay ee kusoo biira kooxda da’yarta ee Arsenal iyadoo ay sidoo kale xagaagan yimaadeen xiddigaha kala ah George Lewis, Tim Akinola iyo Jonathan Dinzeyi.